ပေါ်လစီ | ဧရာမ, ဧရာတောင်တန်း, ခကျြပရဒိသု
ဆာဗာ PetrPikora.com သင့်ရဲ့အမြင့်မားဆုံးလုံခြုံမှုကိုလုံခြုံနည်းပညာ HSTS (HTTP ကိုတင်းကျပ်ပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံရေး) အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သည် HTTP တင်းကျပ်ပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံရေး(HSTS) ကိုအဆင့်နှိမ့်တိုက်ခိုက်မှုမတိုင်မီဝဘ်ဘရောက်ဇာများနှင့်တစ်ဦး web server သို့အကြားကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ပြန်ပေးဆွဲဆက်သွယ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးယန္တရားအတွက်သိပ္ပံဖြစ်ပါတယ်။cookie ကိုပြန်ပေးဆွဲ) ။ အဆိုပါယန္တရား browser ကိုပြဋ္ဌာန်းရန်ဖို့က်ဘ်ဆာဗာက encrypt လုပ်ထား HTTPS ကိုဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်သာဆက်သွယ်ပြောဆိုခွင့်ပြု, ကာမလုံခြုံသော HTTP protocol ကိုကျော်အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအရွှေ့ထွက်နေပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ RFC 6797 နေဖြင့်သတ်မှတ် HSTS ။ အဆိုပါ Web server က HTTP ခေါင်းစီး HSTS အသုံးပြု. activated ဖြစ်ပါတယ်တင်းကျပ်သော-ပို့ဆောင်ရေး-လုံခြုံရေး,ယင်း၏တန်ဖိုး browser ကိုသာလုံလုံခြုံခြုံဆာဗာကိုဝင်ရောက်နိုင်သည့်ကာလအတွင်းအချိန်ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်သော။ HSTS အချို့ passive (wiretapping) ဆန့်ကျင်သော web applications များနှင့်တက်ကြွကွန်ယက်ကိုတိုက်ခိုက်မှုအားကာကွယ်ရန်ကူညီပေးသည်။ကျေးဇူးတင်ပါသည် HSTS ယန္တရားတစ်ခု Man-in-the-Middle တိုက်ခိုက်မှု, မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်များကို၏ဖမ်းယူခြင်းအသုံးပြုသူနှင့် web application ကိုအကြားစေလွှတ်သောအလွန်လျှော့ချခွင့်အလမ်းတွေကိုအသုံးပြုသည်သူတစ်ဦးတိုက်စစ်မှူးရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဂရုစိုက်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အကြောင်းကိုအောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း:
Informace, které jsou nepovinnéတစ်jenžuživateléposkytujídobrovolně။ Jedná se ဏjméno, případněpřezdívku e-mailovou adresu, popřípadě adresu webovéstránky။ တူတူဒရော jsou dobrovolněposkytnuté informace လိုလားသူလိုလားသူúčast v komentářích ke článku, popřípaděလိုလားသူodběrodpovědíဋtěmtokomentářům av အnávštěvní knize ။
passive စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် (ဆိုလိုသည်မှာ။ သငျသညျတက်ကြွစွာသတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးမပါဘဲရရှိထားသည့်) ထိုသို့သောအင်တာနက်ပရိုတိုကောလိပ်စာတွေ, cookies, အင်တာနက် Tags: အခြားသောသူကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာများနှင့်နည်းလမ်းများ, ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများသည် သာ. ကောင်း၏ချုပ်သမားအကြောင်းအရာခွင့်ပြုလိမ့်မည်နှင့်ကြော်ငြာရှင်များနှင့်စပွန်ဆာပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ကူညီပေးပါမည် ။
na těchtowebovýchstránkách se zobrazují reklamy poskytovanéreklamnímispolečnostmitřetí strany ။ kterévászajímajíတစ်službyzboží na Tyto společnosti mohou používatúdaje (nikoli všakjméno, adresu e-mailovou adresu တစ်telefonníčíslo) o vašichnávštěváchtěchtoဈjinýchwebovýchstránekဋposkytování reklam ။
Google ကတစ်တတိယပါတီရောင်းချသူအဖြစ်, ဒီ site ကို cookies တွေကိုပေါ်တွင်ကြော်ငြာများအစေခံရန်အသုံးပြုသည်။ DART cookie ကို Google ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိဒီ site များနှင့်အခြားဆိုက်များမှသူတို့၏လညျပတျအပေါ်အခြေခံပြီးအသုံးပြုသူများကိုကြော်ငြာဝတ်စေနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများဖတ်စေခြင်းငှါကြော်ငြာနှင့် Google အကြောင်းအရာကွန်ယက်များအတွက်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီအ DART cookie ကိုများအသုံးပြုခြင်းယူမှုကိုဖျက်.
အများစုမှာ browser များအလိုအလြောကျ cookie ကိုဖိုငျလကျခံဖို့သတ်မှတ်ထားကြသည်, ဒါပေမယ့်သင့် browser cookies အားလုံးကိုငြင်းဆန်ရန်သို့မဟုတ်တစ် cookie ကိုစလှေတျတျောခံကြောင်းညွှန်ပြရန်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ cookies တွေကိုမသန်စွမ်းလျှင်အချို့အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို Google စနစ်တကျအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သငျသညျလိုပါကအချိန်မရွေးGoogle က Inc မှမှ cookie ကိုဖိုင်တွေငြင်းဆန်တဆင့် GDNDoubleClick cookies တွေကိုငြင်းပယ်.
တစ်ဦးက Internet Explorer záznam "DoubleClick cookie ကို" Firefox ကိုprohlížečíchinternetových Advertising ကြော်ငြာ Cookie Opt ထွက် Plugin ကိုpermanentnězakáže v, který je využíván Googlem လိုလားသူvyhodnocenínávštěvnostiodkazůတစ်následně pak လိုလားသူreklamníúčely။
ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်တွင်, သင်သည်သင်၏ site ၏ URL ကိုအဖြစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်နှင့်မှန်ကန်သောဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူကုမ္ပဏီ, အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီ၏အမည်ကိုဖော်ပြထားခြင်းသငျ့သညျ။
သငျသညျပေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုအချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုဥရောပသို့မဟုတ်အမျိုးသားရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်ဥပဒေများပေါ် မူတည်. ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာ, မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များကိုရန်လိုအပ်သည်။
အကြံပြုစာသားကို:ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာဖြစ်ပါသည်: https://petrpikora.com ။
ဤအပိုင်းကို၌သင်တို့ကိုကျနော်တို့အသုံးပြုသူများနှင့် site ကိုဧည့်သည်များအနေဖြင့်စုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘယ်အရာကိုသတင်းအချက်အလက်ညွှန်ပြသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာဥပမာ, ဒေတာအရောင်းအစေခြင်းငှါ - သတင်းအချက်အလက်ဝယ်ယူရန်; နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ - cookies တွေကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်; နှင့်သတင်းအချက်အလက်များပုဂ္ဂိုလ်ရေး - အသုံးပြုသူအကောင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ။
ကျွန်တော်စုဆောင်းသင်သည်အဘယ်ကြောင့်စုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းအပြင်ကမှတ်ချက်ပြုရပါမည်။ ဤသည်ရှင်းပြချက်အကောင့်ထဲသို့စုဆောင်းခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏, သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူ၏တက်ကြွသောသဘောတူညီခကျြအတှကျဥပဒေရေးရာအခြေခံဖြစ်စေယူရမည်ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုသာသင့်ရဲ့ဆိုက်နှင့်အသုံးပြုသူအပြန်အလှန်ဖန်တီးနေကြသည်။ personal data ထိုကဲ့သို့သောအဆက်အသွယ်ပုံစံများ, မှတ်ချက်များတွေ, cookies, ပါဝင်သော analytics နှင့် Third-party ဒေတာအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအားဖြင့်ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, WordPress ကိုဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းမှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများသည်များအတွက်အုပ်ချုပ်မှုစာမျက်နှာကို "ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို" ပေါ်တွင်ပြသမှသာဒေတာစုဆောင်းမထားဘူး။ သို့သော်, သင့် plugins ကိုအချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းလိမ့်မည်။ သင်ဆက်စပ်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များထည့်ပါမယ်အောက်တွင်။
ဒီပုဒ်မခွဲများတွင်သင်မှတ်ချက်များမှတစ်ဆင့်မှတျတမျးတငျထားသောအရာကိုသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအခြေခံ WordPress ကိုစုဆောင်းသောအရာကို ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ထားအောက်တွင်။
အကြံပြုစာသားကို:ဧည့်သည်ကဤ website ကိုမှမှက်ချက်ပေးရန်အတွက်တဲ့အခါမှာ, ဒေတာကိုစပမ် detect လုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်ထားတဲ့ browser ကို defining နောက်ထပ်ဧည့်သည်ရဲ့ IP လိပ်စာနှင့် User-agent string ကို, မှတ်ချက်ပေးရန်ပြပုံစံစုဆောင်းနေကြသည်။
Gravatar ဝန်ဆောင်မှုအမည်မသိကွင်းဆက်များကထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုသင်အသုံးပြုလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာ (လည်း hash တွေကိုခေါ်) ၏ဖွင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ Gravatar ဝန်ဆောင်မှုကိုဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်: https://automattic.com/privacy/ ။ သင့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေများ၏အခြေအနေတွင်အများပြည်သူမြင်နိုင်သင်၏ပရိုဖိုင်ပုံနှင့်သင်၏ထင်မြင်ချက်များ၏ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်။
ဒီပုဒ်မခွဲ, သင်မီဒီယာဖိုင် upload လုပ်နိုင်တဲ့သူကိုအသုံးပြုသူမှထုတ်ဖော်စေခြင်းငှါအဘယျသို့သတင်းအချက်အလက်ကိုသတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ အားလုံးအပ်လုဒ်တင်ပြီး files တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်ပါသည်။
အကြံပြုစာသားကို:သင်ဤ website ကိုမှပုံရိပ်များများကိုအပ်လုဒ်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျ embedded တည်နေရာသတင်းအချက်အလက် (EXIF ဂျီပီအက်စ်) နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအပ်လုတ်ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ site ကိုမှဧည့်သည်များ site ပေါ်တွင်ပုံ၏တည်နေရာပေါ်မဆိုဒေတာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် WordPress ကိုပုံစံများကိုဆက်သွယ်မထားဘူး။ သငျသညျကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန် plugin ကိုသုံးလျှင်, တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအဆက်အသွယ်ပုံစံတင်ပြသည့်အခါမှတ်တမ်းတင်ထားသည်နှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဤအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘယ်အရာကိုဒေတာကိုသတ်မှတ်ဤပုဒ်မခွဲကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, အချို့သောအချိန်များအတွက်ပုံစံကိုလက်ခံရရှိ, သင်မူကားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုမသုံးကြဘူးစောင့်ရှောက်သောသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီပုဒ်မခွဲများတွင်, သင်သည်သင်၏ site ကိုသင့်ရဲ့ plugins ကို, လူမှုရေးမီဒီယာနှင့် analytics ဖန်တီးသောသူတို့အပါအဝင်ကိုအသုံးပြုသည် cookies ရာညွှန်ပြသင့်ပါတယ်။ အောက်တွင် WordPress ကို၏ default installation အားဖြင့် cookies များကိုဖြစ်ကြသည်။
အကြံပြုစာသားကို:ကျွန်ုပ်တို့၏ site သင်တစ်ဦးမှတ်ချက် add လျှင်, သင် cookies များကိုများတွင်အမည်များ, အီးမေးလ်လိပ်စာများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသိုလှောင် enable နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အသစ်တခုမှတ်ချက် post သောအခါအသင်တို့၏သက်သာတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားဤနည်းအားဖြင့်, ထို့နောက်သင်တို့သည်ဤဒေတာဖြည့်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကား cookies များကိုတစ်နှစ်တစ်ဘဝကိုရပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအကောင့်တစ်ခုရှိသည်နှင့်ဤဆိုဒ်တွင် log လျှင်, ငါတို့သည်သင်၏ browser cookies များကိုလက်ခံကြောင်း verify လုပ်ဖို့ယာယီ cookie ကိုခန့်ထား၏။ ဤသည် cookie ကိုအဘယ်သူမျှမကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်, သင်သည် browser ကိုဖျက်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်ပိတ်လိုက်သောအခါ။
သင်သည်သင်၏ရဲ့ login သတင်းအချက်အလက်နှင့် display ကို setting များကိုမျက်နှာပြင်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတော်ကြာ cookies များကိုတင်ထားရန်အပေါ် log အခါ။ login cookies တွေကိုနှစ်ရက်တစ်ဦးဘဝကိုရှိသည်, နှင့်သင့် display ကိုဆက်တင်ပေါ်တွင် cookies များကိုတစ်နှစ်တစ်သက်တမ်းရှိသည်။ သငျသညျမှာ "မှတ်မိ" အတည်ပြုထားလျှင်, သင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုကိုနှစ်ပတ်ကြာကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲကရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ရဲ့ login cookies များကိုဖျက်ပစ်နေကြသည်။
သငျသညျနောကျတသင့် browser cookie ကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်သည့်ဆောင်းပါးကိုတည်းဖြတ်သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန်လျှင်။ အဆိုပါ cookie ကိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာဆံ့နှင့်ရိုးရှင်းစွာပို့စ် ID ကိုရည်ညွှန်းမထားဘူး, သင်ရုံ edited ပါပြီ။ ဒါဟာ 1 ရက်အကြာမှာကုန်ဆုံး။
အခြား site ကနေ Embed အကြောင်းအရာ
အကြံပြုစာသားကို:ဒီ site ပေါ်တွင် entries (ဥပမာ embedded အကြောင်းအရာဆံ့စေခြင်းငှါ, ဗီဒီယိုက, Images ကို, ဆောင်းပါးများ, etc) ။ အဆိုပါဧည့်သည်အခြား site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုလျှင်ကဲ့သို့သောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကနေ embedded အကြောင်းအရာတူလမ်းအတွက်ပြုမူ။
သငျသညျအကောင့်တစ်ခုရှိသည်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ logged in ဝင်သောလျှင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များ, အပိုဆောင်း Third-party ခြေရာခံခြင်းချပြီး, သင် cookies တွေကိုသုံးပြီးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းနှင့်မြှုပ်နှံရန်အကြောင်းအရာနှင့်အတူအပြန်အလှန်၏ခြေရာခံအပါအဝင်ဒီ embedded အကြောင်းအရာ, နှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ခြေရာခံနိုငျသညျ။
ဒီပုဒ်မခွဲ, သင်သည်အသုံးပြုသူများခြေရာခံခြင်းထဲကရွေးချယ်နိုင်ပြီး, ကိုလည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာန်ဆောင်မှုများသင့်ရဲ့ပံ့ပိုးပေးသဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးမယ့် privacy ကိုမူဝါဒ link တစ်ခုပေးသင့်တယ်ဘယ်လိုသင်အသုံးပြုရသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tool ကိုညွှန်ပြသင့်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, WordPress ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒေတာစုဆောင်းမထားဘူး။ သို့သော်များစွာသော hosting အကောင့်အချို့အမည်မသိဒေတာစုဆောင်းပါ။ ဒါ့အပြင်သင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် WordPress ကို plugin ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီ plugin ကိုမှသတင်းအချက်အလက်များထည့်ပါ။
ဤအပိုင်းကို၌သင်တို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းသင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူမျှဝေခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်အဘယျသို့သတင်းအချက်အလက်ကိုသတ်မှတ်, ထိုအမည်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, Cloud န်ဆောင်မှုများ, ငွေပေးချေမှု gateway များနှင့် Third-party ဝန်ဆောင်မှုပေးအပါအဝင်သင်တစ်ဦးက Web data share ဘယ်သူကိုနှင့်အတူအားလုံး Third-party ပံ့ပိုးများ၏စာရင်းကိုပေးသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများလင့်များပေးပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် WordPress ကိုမည်သူမဆိုမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးမထားဘူး။
ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်တွင်သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသို့မဟုတ်ဤ site ကိုအားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌စောင့်ရှောက်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးရှင်းပြသင့်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအချိန်ဇယားရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်နေစဉ်, သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဝသကဲ့သို့ရှည်လျားသငျသညျအသီးအသီးဒေတာကိုသတ်မှတ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြပါစောင့်ရှောက်အဖြစ်ဤအချက်အလက်ဤနေရာတွင်စာရင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်နှစ်ဖောက်သည်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအချက်အလက်များနှင့်မှတ်တမ်းများဆယ်နှစ်ကာလကိုဝယ်ယူသည်, ခြောက်လအဆက်အသွယ်ပုံစံများ၏မှတ်တမ်းများစောင့်ရှောက်သောညွှန်ပြချင်ပေလိမ့်မည်။
အကြံပြုစာသားကို:သင်တစ်ဦးမှတ်ချက် add လြှငျ, မှတ်ချက်နှင့် metadata အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းထားသည်။ အဆိုပါဒေတာကိုအစားဖြည့်ညှင်းတန်းစီကိုင်ထား၏, အလိုအလျှောက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲမှတ်ချက်များ၏ခွင့်ပြုချက်အဘို့အသိမ်းဆည်းထားသည်။
(သင်ကဒီ option ကိုရှိပါက) ဒီ site ပေါ်တွင် register သူကိုအသုံးပြုသူများအတွက်လည်းငါတို့သည်သင်တို့၏အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်ထဲမှာပေါ်လာကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသုံးစွဲသူများသည့်အချိန်တွင်မဆိုကြည့်ရှု (သူတို့သည်သင်၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုမပြောင်းနိုင်သောချွင်းချက်နှင့်အတူ) သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည်လည်းဤအချက်အလက်ရှုမြင်ခြင်းနှင့်မွမ်းမံနိုင်ပါသည်။
အကြံပြုစာသားကို:သင်ဤ site ပေါ်တွင် account တစ်ခုရှိသည်သို့မဟုတ်သင်မှတ်ချက်များဖြည့်စွက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့အားပေးသမျှသောသတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ပတ်သက်ကိုင်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များများတင်ပို့ဖိုင်ကိုရယူဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သင်သည်လည်းငါတို့သင်တို့ကို အကြောင်းပြု. ကိုင်ရာကိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ဖယ်ရှားရေးတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဒီ option ကကျွန်တော်, အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအရသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်မပါဝင်ပါဘူး။
ဤအပိုင်းကို၌သင်တို့ကိုဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပမှာသင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်မှာရှိသမျှ data တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့်ဒေတာပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူကာကွယ်ထားသည်အရာအတွက်လမ်းကိုဖော်ပြရန်သငျ့သညျ။ ဤအပိုင်းကိုသင်၏ဝဘ် hosting အတွက်, Cloud သိုလှောင်မှုန်ဆောင်မှုများ, သို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီများပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ဥရောပ data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေဒေတာဥရောပအခြေစိုက်ခဲ့ကြပါလျှင်အဖြစ်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပတွင်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ကြောင်းဥရောပလူဦးရေနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များတူညီတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ဥပဒေတွေဖြင့်ကာကွယ်ထားကြသည်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်, တည်နေရာဒေတာကိုထည့်သွင်းဖို့အပြင်, သင်မသက်ဆိုင်ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်စာချုပ်များသို့မဟုတ် binding ကော်ပိုရိတ်စည်းမျဉ်းများ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဝါကျအဖြစ်ရှိမရှိသဘောတူညီချက်၏, ဤစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းသေချာဘယ်လိုဖော်ပြရန်, တစ်ခုခုကိုသင်သို့မဟုတ်တတိယပါတီများအားဖြင့်သင့်တယ် ။
အကြံပြုစာသားကို:ဧည့်သည်မှတ်ချက်များကိုပြည်ပမှာတည်ရှိစေခြင်းငှါအရာ automated spam များကိုထောက်လှမ်းဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဤအပိုင်းကို၌သငျ privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအဘို့အအဆက်အသွယ်နည်းလမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးခန့်ထားခဲ့သောရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်နေတယ်ဆိုရင်လည်း၎င်းတို့၏အမည်နှင့်ပြည့်စုံအဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။
သငျသညျစီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် website တစ်ခုသုံးပါနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ရှုပ်ထွေးစုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ပါကသင်၏အခြေခံမူများအပြင်တွင်လည်းအောက်ပါအချက်အလက်များကိုပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်တွင်သင် user data ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရာအစီအမံကိုရှင်းပြသင့်တယ်။ သင်, တတ်နိုင်သမျှဥပမာကဲ့သို့သောနည်းပညာဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များ: encryption ကို; ။ ထိုကဲ့သို့သောပေါင်းစုံ factor authentication အဖြစ်လုံခြုံရေးအစီအမံ; ဒီလို privacy ကိုအတွက်န်ထမ်းများ၏လေ့ကျင့်ရေးကဲ့သို့သောအခြားအစီအမံ။ သငျသညျ privacy ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရာ၌ခန့်ထားပြီလျှင်, သင်ဖော်ပြရန်အကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည်။
ဤအပိုင်းကို၌သငျ, ထိုကဲ့သို့သောပြည်တွင်းရေးအစီရင်ခံစနစ်များအဖြစ်အစစ်အမှန်သို့မဟုတ်အလားအလာရှိမရှိ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလိပ်စာဒေတာယိုစိမ့်မှမရရှိနိုင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ bug တွေရှာဖွေအဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်၏ယန္တရားများကိုရှင်းပြသင့်တယ်။
သင့်ရဲ့ site ကိုကြော်ငြာရှင်များအပါအဝင်တတိယပါတီများကနေ user data ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့လျှင်, ဤအချက်အလက် Third-party ဒေတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအရာဟာသင့်ရဲ့ privacy အသိပေးစာ၏အခန်းတွင်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူဒေတာကိုပေးအဘယ်အရာကို
ဥပမာအားဖြင့်ဖောက်သည်အကြွေးလျှောက်ထားသို့မဟုတ်ကြော်ငြာပရိုဖိုင်းကိုမှဒေတာစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြု - - သင်ကဤလုပ်ငန်းစဉ်များထားရန်ရှိသည်, ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်ဤစုစည်းဒေတာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အခွင့်အရေးများကိုသူတို့ယျသင့်ရဲ့ automated ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဝင်သည်ကြောင်းန်ဆောင်မှုများပေးလျှင် လူ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါဘဲဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကို။
သင်တစ်ဦးစညျးမဉျြးစညျးကမျးစက်မှုလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်လျှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အကယ်. privacy ကိုအကြောင်းကိုသည်အခြားဥပဒေများဘာသာရပ်များမှာသင်ဒီမှာလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုထုတ်ဖော်ဖို့တောင်းနိုင်ပါသည်။
သင်သည်မည်သည့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာမေးခွန်းများရှိပါကမှာအီးမေးလ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီးသီးသန့်လုံခြုံရေး.
www.PetrPikora.com မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များ၏ privacy ကိုအလွန့်အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်စဉ်းစားပါ။ ဒီသီးမူဝါဒကိုစာရွက်စာတမ်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ၏အမျိုးအစားများ www.PetrPikora.com ငါတို့သည်အဘယ်သို့အသုံးပြုရန်အားဖြင့်ကောက်ခံခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်သည်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
များစွာသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များလိုပဲ www.PetrPikora.com မှတ်တမ်းဖိုင်တွေရဲ့အသုံးကိုမှန်ကန်စေသည်။ အများအားဖြင့် hosting ကုမ္ပဏီများအတွက်တစ်ဦးစံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု hosting ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - ဤဖိုင်များကို Merel ဆိုက်မှဧည့်သည်များမှတ်။ ဃဖိုင်တွေအတွင်းမှသတင်းအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာများ, browser ကိုအမျိုးအစား, Internet Service Provider (ISP) မှ, နေ့စွဲ / အချိန်တံဆိပ်ခေါင်း, ရည်ညွှန်း / ထွက်ပေါက်စာမျက်နှာများနှင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကလစ်၏အရအေတှကျပါဝင်သည်။ ဤအချက်အလက်သည်အဆိုပါ, ခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆိုက်ပတ်လည်ဆိုက်, လမ်းကြောင်းအသုံးပြုသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်အသုံးပြုသည်။ အိုင်ပီလိပ်စာများ, မိုးခေါင်ခြင်းနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသက်သေပြသည်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်။
www.PetrPikora.com '' ထို site ဧည့်သည် access လုပ်ပါတယ်သို့မဟုတ်လညျပတျဘယ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်အသုံးပြုသူ-တိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်ဖို့, ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုနှင့်ဧည့်သည်များအပျေါ၌အခြေစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝဘ်စာမျက်နှာအကြောင်းအရာ personalize သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် '' ဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ cookies များကိုအသုံးပြုသည်ဘရောက်ဇာအမျိုးအစားသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်ဒါက ထိုဧည့်သည်သူတို့၏ဘရောက်ဇာကနေတဆင့်ပို့ပေးသည်။
→ Google ကတစ်တတိယပါတီရောင်းချသူအဖြစ်, www.PetrPikora.com ပေါ်တွင်ကြော်ငြာများအစေခံရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
→အဆိုပါ DART cookie ကို Google ၏အသုံးပြုမှုကိုသူတို့ www.PetrPikora.com မှအလည်အပတ်ခရီးနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားဆိုက်များကိုအပေါ်သို့အခြေစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ရဲ့ဧည့်သည်များလာရန်ကြော်ငြာများကိုအစေခံဖို့ကဖွင့်မည်။
→အသုံးပြုသူများပြီးနောက် URL မှာ Google ကကြော်ငြာနဲ့ content ကွန်ယက်ကို privacy ကိုမူဝါဒအသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့် DART cookie ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ဖယ်နိုင်ပါစေ -http://www.google.com/privacy_ads.html
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ငြာမိတ်ဖက်တချို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင် cookies နဲ့ web beacons ကိုသုံးနိုင်ပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာမိတ်ဖက်ပါဝင် .......
ဤအကြော်ငြာခြင်းမိတ်ဖက်တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ site ကိုအဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီရှိပါတယ်နေစဉ်, တစ်ဦး updated နှင့်ဆိုက်ဘာအရင်းအမြစ်ကဒီမှာထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်:သီးသန့်လုံခြုံရေးမူဝါဒများ.
သင် privacy ကိုမူဝါဒကို www.PetrPikora.com ၏ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များ၏အသီးအသီးအဘို့ဖြစ်၏တွေ့ပါရန်ဤစာရင်းနှင့်တိုင်ပင်နိုင်ပါစေ။
www.PetrPikora.com မှဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ် Third-party ကြော်ငြာရှင်များအားဖြင့်အသုံးပြုကြပါတယ်ဒါက cookies တွေကိုအဆိုပြုကျော်ထိန်းချုပ်မှုမရှိရှိပါတယ်။
သငျသညျသူတို့အလေ့အကျင့်များအပေါ်ပိုပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အဖြစ်အချို့သောအလေ့အကျင့်များထွက်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုညွှန်ကြားချက်အဲဒီ Third-party ကြော်ငြာဆာဗာသက်ဆိုင်ရာ privacy ကိုမူဝါဒများနှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ www.PetrPikora.com ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒလျှောက်ထားဘူး, ငါတို့သည်မိုးခေါင်သို့မဟုတ်အခြားကြော်ငြာရှင်များကို web site များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူး။ သင်ဒီမှာဘက်စုံအဆိုပြု privacy ကိုမူဝါဒများနှင့်သူတို့၏လင့်များတစ်ဦးစာရင်းကိုရှာဖွေနိုင်ပါစေ:သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ Links များ.
သငျသညျ cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်တစ်ဦးချင်း၏မေလအတွက်သင့် browser options များမှတစ်ဆင့်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကို web browser များနှင့်အတူ cookie ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို browser များ '' သက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာတှေ့နိုငျပါသညျ။ကွတ်ကီးဘာတွေလဲ?
ကျနော်တို့ကအွန်လိုင်းကလေးမြားအတှကျ ADDED ကာကွယ်မှုပေးရန်အရေးကြီးပါသည်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်စောငျ့ရှောကျပါဝင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လမ်းပြကိုသူတို့ကလေးတွေနဲ့အတူအွန်လိုင်းအချိန်ဖြုန်းဖို့မိဘများနှင့်အုပ်ထိန်းသူများတိုက်တွန်းပါသည်။ www.PetrPikora.com သိလျက် 13 ၏နှစ်အောက်ကလေးများအနေဖြင့်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းမထားဘူး။ မိဘတစ်ဦးသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူ www.PetrPikora.com င်း၏ဒေတာဘေ့စအတွက် 13 ၏နှစ်အောက်ကလေးတစ်ဦး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-သက်သေပြသတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်ယုံကြည်သည်ဆိုပါက, (ပထမဦးဆုံးအပိုဒ်အတွက်အဆက်အသွယ်သုံးပြီး) ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီး ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်တမ်းများအနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်။
ကြှနျုပျတို့၏ website အသုံးပြုခြင်းဖြင့်, သင်ဤဥပဒေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသီးသန့်မူဝါဒသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်၎င်း၏၏စည်းကမ်းချက်များကိုသဘောတူသည်။
ငါတို့သည်ငါတို့၏ privacy ကိုမူဝါဒမဆိုအပြောင်းအလဲကို update ပြင်ဆင်ရေးသို့မဟုတ်လုပ်သင့်ပါ, သူတို့သည်အပြောင်းအလဲများကဒီမှာ posted လိမ့်မည်။
ဒါကနမူနာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုစတိုးဆိုင်, ခွဲဝေမှုများနှင့်စတိုးဆိုင်များစုဆောင်းခံရပါစေသောအဘယ်အရာကိုလှည့်ပတ်ဘာသာစကားကိုအခြေခံပါဝင်သည်အဖြစ်ဒါကဒေတာကိုသုံးခွင့်ရှိသည်နိုင်ပါစေ WHO က။ enabled နှင့်ဘယ်ဟာပိုဆောင်း plugins ကိုသင့်ရဲ့စတိုးဆိုင်အားဖြင့်မျှဝေတိကျသောသတင်းအချက်အလက်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ် '' ကိုသုံးနေကြတယ်ဆိုတာကိုဆက်တင်ပေါ်တွင် မူတည်. ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ရန်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာရှေ့နေတစ်ဦးနှင့်အတူတိုင်ပင်အကြံပြုပါသည်။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site သွားရောက်ကြည့်ရှုနေစဉ်, ကျနော်တို့ကိုခြေရာခံပါမယ်:
သင်က Viewed င့်ထုတ်ကုန်များ: ငါတို့သည်ဤကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ဥပမာ, သင်မကြာသေးမီက Viewed င့်ထုတ်ကုန်များပြသ
တည်နေရာ, အိုင်ပီလိပ်စာနဲ့ browser အမျိုးအစား: ကျွန်တော်ခန့်မှန်းအခွန်အခများနှင့်ရေကြောင်းနဲ့တူရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဤကိုသုံးပါလိမ့်မယ်
shipping လိပ်စာ: ငါတို့သည်သင်တို့အမိန့်နေရာမတိုင်မီကျနော်တို့ဥပမာ, ရေကြောင်းခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်ဒီနှင့်အတူထည့်သွင်းရန်သင့်အားမေးပါ, သင်အမိန့်ကိုပေးပို့မယ်!
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site browsing နေနေချိန်မှာကျနော်တို့ဒါ့အပြင်လှည်း contents တွေကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
မှတ်စု: သင်အသေးစိတ်, သင်၏ cookie ကိုရေးမူဝါဒထပ်မံချင်နိုင်ပါစေ, ဒီမှာကနေအဲဒီအပိုင်းလင့်ထားသည်။
သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှဝယ်ယူတဲ့အခါမှာကျနော်တို့က username နှင့် password ကဲ့သို့သင်၏အမည်, ငွေတောင်းခံလိပ်စာ, ရေကြောင်းလိပ်စာ, အီးမေးလိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်, ခရက်ဒစ်ကဒ် / ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် optional ကိုအကောင့်သတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အမည်ရ, ထိုကဲ့သို့သော Microsoft ကအဖြစ်, ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်:
သင့်အကောင့်များနှင့်အမိန့်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်သင်သည် Send
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်အဘို့သင့်အကောင့်ကို set up
ကျနော်တို့ဒီလို Microsoft ကအခွန်တွက်ချက်အဖြစ်ငါတို့သည်ဥပဒေရေးဆိုင်ရာတာဝန်နှင့်အတူလိုက်လျော
သငျသညျအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးလျှင်, ငါတို့သည်အနာဂတ်အမိန့်များအတွက်ကုန်ပစ္စည်း populate အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်ဘယ်ဟာ, သင့်အမည်, လိပ်စာ, အီးမေးလ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုသိမ်းဆည်းပါလိမ့်မယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းအသုံးပြုရန်ဘယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ချက်များများအတွက်သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်အဘို့အသငျသညျအကွောငျးကိုအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထား, ကြှနျုပျတို့ဥပဒေကစောင့်ရှောက်ဖို့ဆက်လက်မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့အခွန်နှင့်စာရင်းကိုင်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ကို XXX နှစ်ပေါင်းအလို့ငှာအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်သင်တို့၏နာမ, အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်ရေကြောင်းလိပ်စာများပါဝင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဝင်များကိုသင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသတင်းအချက်အလက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ဆိုင်မန်နေဂျာနှစ်ဦးစလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
ဒါဟာဝယ်ယူခဲ့နဲ့ဒါဟာကိုစေလွှတ်ရပါမည်အဘယ်မှာရှိတဲ့အခါ, ဝယ်ယူခဲ့ရာတူသောသတင်းအချက်အလက် ပြင်ဆင်. ,
ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်တွင်သင်ခွဲဝေမှုဒေတာနှင့်အတူနေ WHO ကစာရွက်သင့်ပါတယ်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရည်ရွယ်ချက်သည်။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်နိုင်ပေမယ့်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု, စျေးကွက်, ငွေပေးချေမှု gateway များ, ရေကြောင်းပံ့ပိုးနှင့်တတိယပါတီမြှုပ်ထည့်ထားသည်များမှကန့်သတ်မရနိုင်ပါစေ။
ငါတို့သည်သင်တို့မှငါတို့အမိန့်များနှင့်စတိုးဆိုင်န်ဆောင်မှုကိုကူညီပေး WHO ကတတိယပါတီများမှအချက်အလက်တွေဝေမျှ; ဥပမာ -
ဒီပုဒ်မခွဲခုနှစ်တွင်သင်မေလတွင်ဖောက်သည် data တွေကိုကိုင်တွယ်ပြီးကတည်းကပြုလုပ်သင့်ရဲ့စတိုးဆိုင်အဆိုပြုအပေါ်ငွေပေးချေမှုယူအသုံးပြုနေဘယ်တတိယပါတီငွေပေးချေမှု processors ကိုစာရင်းပြုစုသင့်တယ်။ ကျနော်တို့ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် PayPal ကထည့်သွင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်က PayPal ကအသုံးမပြုနေလျှင်သင်ဒီကိုဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ PayPal ကမှတဆင့်ငွေပေးချေမှုလက်ခံပါ။ ငွေပေးချေမှု processing အခါ, သင့်ရဲ့ဒေတာအချို့ကိုထိုကဲ့သို့သော Microsoft ကစုစုပေါင်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်ငွေတောင်းခံသတင်းအချက်အလက်များသည်အတိုင်း, ငွေပေးချေသို့မဟုတ်ထောက်ခံမှု process တစ်ခု PayPal ကအပါအဝငျပြန်ကြားရေးလိုအပ်ပါသည်လွန်ပါလိမ့်မည်။
ယင်းကိုကြည့်ပါ ကျေးဇူးပြု.PayPal ကသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီအသေးစိတ်ကို။
ဤ extension ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာသို့မဟုတ်ခွဲဝေမှု data တွေကိုသိုလှောင်နိုင်ပါသည်။သင်သည်သင်၏ privacy ကိုမူဝါဒပါဝင်သည်ချင်နိုင်ပါစေအဘယျသို့အပါအဝင်, ဒီအလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ရင်းမြစ်: Slider ကတော်လှန်ရေး
ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက် Google က operated ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာယူကျု့မှ plugins ကိုအသုံးပြုသည်။ YouTube ကို LLC, 901 ချယ်ရီရိပ်သာ, စန်းဘရူနို,, CA 94066, အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်အတူစာမျက်နှာများ၏အော်ပရေတာ။
သင်တစ်ဦး YouTube ကို plugin ကို featuring ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာများကိုတဦးသွားရောက်ကြည့်ရှုလျှင်, YouTube ကိုဆာဗာများချိတ်ဆက်ဖို့စတင်တည်ထောင်ထားပါသည်။ ဒီနေရာတွင်ပြည်နယ်များသွားရောက်ခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာများဘယ်အကြောင်းကိုအသိပေး YouTube အ server တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ YouTube ကိုအကောင့်ကို logged ဆိုရင်တော့ YouTube ကိုသင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းနှင့်အတူတိုက်ရိုက်သင့်အသုံးပြုမှုအပြုအမူပေါင်းသင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင့် YouTube အကောင့်ထဲက logging ဖွငျ့ဤကာကွယ်မည်နိုင်သလား။
YouTube ကိုကြှနျုပျတို့၏ website ဆွဲဆောင်စေကူညီရန်အသုံးပြုနေသည်။ ဤသည်အနုပညာအညီတစ်ဦးညှိအကျိုးစီးပွားရှိပါသည်။6(1) (စ) DSGV ။
user data ကိုကိုင်တွယ်အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက် YouTube ကိုအောက်မှာ၏ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကြေငြာတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်ဟာ Vimeo ပေး features တွေကိုအသုံးပြုသည် ဗီဒီယို ပေါ်တယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှု Vimeo Inc ကို, 555 18th အနောက်လမ်း, နယူးယောက်, New York က 10011, အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။
သငျသညျ plug-in များနှင့် Vimeo featuring ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာများကိုတဦးသွားရောက်ကြည့်ရှုလျက်, ဆာဗာဆက်သွယ်မှု Vimeo တည်ထောင်လျှင်။ ဤတွင် Vimeo site ကိုသငျသညျပြည်နယ်များသွားရောက်ခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာများဘယ်အကြောင်းကိုအကြောင်းကြားသည်။ အပြင်, Vimeo သင့် IP address ကိုခံရလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ plugin ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုတစ်ခုသို့မဟုတ် Vimeo အကောင့်မရှိဘူးတဲ့အခါ Vimeo logged in ဝင်သောကြသည်မဟုတ်လျှင်ဒီဒါ့အပြင်သက်ဆိုင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များအဆိုပါ Vimeo နှင့်၎င်းသည်သိမ်းထားတဲ့အဘယ်မှာရှိအမေရိကန်အတွက်ဆာဗာမှတဆင့်ကူးစက်သောဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏အကောင့် Vimeo logged in ဝင်သောနေတယ်ဆိုရင်, Vimeo သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းနှင့်အတူတိုက်ရိုက်သင့်အသုံးပြုမှုအပြုအမူပေါင်းသင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်သည်သင်၏ Vimeo အကောင့်ထဲက logging ဖွငျ့ဤကာကွယ်မည်နိုင်သလား။
user data ကိုကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, Vimeo မှာသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီဖတ်ရှုပါhttps://vimeo.com/privacy.
ဖောင့်များ၏ယူနီဖောင်းကိုယ်စားပြုမှုအဘို့, ဒီစာမျက်နှာ Google ကထောက်ပံ့က်ဘ်ဖောင့်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ သင်တစ်ဦးစာမျက်နှာကိုဖွင်အခါသင်၏ browser ကိုမှန်ကန်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာရဲ့ cache ကိုခင်းကျင်းပြသကျမ်းများနှင့်ဖောင့်သို့လိုအပ်တဲ့ဖောင့်တင်ပေးပါတယ်။
ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်ကို browser Google ဆာဗာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုထူထောင်ဖို့ရှိပါတယ်။ Google ကထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝဘ်စာမျက်နှာသင်၏ IP လိပ်စာကိုမှတဆင့်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ဒါကသတိထားမိဖြစ်လာသည်။ Google က Web ကိုဖောင့်အသုံးပြုခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ plugin ကိုတစ်ယူနီဖောင်းများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုတင်ဆက်မှုများ၏အကျိုးစီးပွား၌ပြစ်မှားမိသည်။ ဤသည်အနုပညာအညီတစ်ဦးညှိအကျိုးစီးပွားရှိပါသည်။6(1) (စ) DSGV ။
သင့် browser ကို web ဖောင့်ကိုထောကျပံ့ဘူး, font ကိုစံသင်၏ကွန်ပျူတာအားဖြင့်အသုံးပြုလျှင်။
user data ကိုကိုင်တွယ်အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည်https://developers.google.com/fonts/faqနဲ့ Google ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒမှာhttps://www.google.com/policies/privacy/.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာများတွင်, လူမှုကွန်ယက်ကို SoundCloud ၏ plugins ကို (SoundCloud လီမိတက်, Berners အိမ်, 47-48 Berners လမ်း, လန်ဒန် W1T 3NF, ဗြိတိန်) ပေါင်းစည်းခြင်းကိုခံရပါစေသော။ အဆိုပါ SoundCloud plugins ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင် SoundCloud လိုဂိုအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site သွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ, သင်၏ browser နှင့်ဆာဗာအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု SoundCloud plugin ကိုမှတဆင့်စတင်တည်ထောင်ထားပါသည်။ ဤသည်ကိုသင်သင့် IP လိပ်စာကနေကျွန်ုပ်တို့၏ site Visited ဖူးဒါဟာသတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိရန် SoundCloud ဖွင့်မည်။ သင်သည်သင်၏ SoundCloud အကောင့်သို့ logged နေစဉ်သင် "လိုပဲ" သို့မဟုတ် "Share" ခလုတ်ပေါ် click လုပ်ပါလျှင်, သင်သည်သင်၏ SoundCloud ပရိုဖိုင်းကိုကြှနျတျောတို့၏စာမျက်နှာများတွင်များ၏ content လင့်ထားသည်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည် SoundCloud ကသင်၏ user account နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏စာမျက်နှာများမှလာရောက်လည်ပတ်သူပေါင်းသင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ကျနော်တို့အဆိုပြုစာမကျြနှာမြား၏ပံ့ပိုးပေးအဖြစ်ကျနော်တို့ကူးစက်သည့်အချက်အလက်များ၏အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ဘယ်လို SoundCloud အားဖြင့်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်မသိရှိသည်, ဒါကထောက်ပြလိုပါ။ SoundCloud ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, https://soundcloud.com/pages/privacy ကိုသွားပါ။
သငျသညျ SoundCloud သင့်ရဲ့ SoundCloud အကောင့်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ site ရန်သင့်အလည်အပတ်ခရီးပေါင်းသင်းချင်ကြဘူးဆိုရငျ, သင့်ရဲ့ SoundCloud အကောင့်ကနေ log out ပေးပါ။